Waa tee kooxda John Terry u soo bandhigtay mushaar 10 Milyan oo Dollar ah sanadkii? – Gool FM
Waa tee kooxda John Terry u soo bandhigtay mushaar 10 Milyan oo Dollar ah sanadkii?
Haaruun November 3, 2016
(London), 03 Nof 2016 –Daafaca Kooxda Chelsea ee Waddanka Ingiriiska John Terry oo qandaraaskiisa naadigaasi ku eg yahay xilli ciyaareedkan ayaa waxaa dalab uu uga yimid kooxda Guangzhou Evergrande ee Horyaalka Waddanka Shiinaha oo u soo bandhigtay heshiis uu sanadkii ku qaadanayo 8 Milyan oo Giniga Istarliinka ah (10 Milyan oo Dollar).
Terry oo 35 sano jir ah ayaa haatan ah Safiirka kooxda Guangzhou Evergrande ee uu macallinka u yahay Luiz Felipe Scolari.
Dhinaca kale Terry oo ku jira waqtiyadiisii ugu dambeeyay Kubadda Cagta ayaa waxa uu haatan bartaa cashirro la xiriira Leysinka Tababarenimada, waxaana la filayaa in marka uu ka fariisto kubadda Cagta uu ku soo biiro caalamka Tababareyaasha.
Chelsea captain John Terry will be offered at least £8m a year to play for Guangzhou Evergrande, in the Chinese Super League. [Mail] pic.twitter.com/b91kOt8ebQ
— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) November 3, 2016
Liverpool oo soo bandhigtay Qiimaha lacageed ee uu joogo xidigeeda Philippe Coutinho
Dick Advocaat "Memphis Depay waa inuu isaga tagaa Manchester United si uu xal u helo"